Tag: google panda | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ, ngwaọrụ ndị dị mfe bụ ihe kachasị baa uru. Oge ụfọdụ, ndị ahịa anyị na-eche ma mgbanwe algorithm nke Google na-aga n'ihu na-emetụta ha. Anyị anaghị echegbu onwe anyị banyere ha dịka anyị nwere n'oge gara aga - n'eziokwu niile na algọridim ahụ abawanyela nke ọma na anyị na-elekwasị anya karịa n'ịde ọdịnaya ka mma ma hụ na ọ dị mfe ịkekọrịta. Ọ bụrụ n'ịchọrọ n'ezie
Google Panda na Plain English
Wednesday, February 1, 2012 Douglas Karr
O siri ike ikwere na anyị na-abịa n'otu afọ ebe Google wepụtara ihe kpatara mmelite algorithm nke akpọrọ Google Panda. Ọ bịara na-enweghị ihe mgbu maka Google na, n'ikpeazụ, atụmatụ iji weghachite Google Panda. Mgbe otu afọ nke bibiri ihe Google weere dị ka saịtị "spammy", olee otu Panda si emetụta gị? Enweela mkparịta ụka na-enweghị nkwụsị n'etiti ndị na-ere ahịa ịntanetị na SEO banyere otu esi echekwa saịtị gị na Panda, mana
Anya Black Panda nke Google Panda
Thursday, June 9, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Omeela ọnwa ole na ole Google jiri bulie algọridim ya na nkwalite Panda ama ama ma anyị nọ na onye ọzọ… Panda 2.2. M dere echiche m ebe a na ebe a… ma ka na-enwe mgbagwoju anya ma ọ ga-emeziwanye ihe ọ bụla. O mere; Otú ọ dị, kụrụ nnukwu saịtị dịka ChaCha na-enweghị ịdọ aka ná ntị. ChaCha gbara ọkụ ma rụọ ọrụ ozugbo iji meziwanye nkatọ ụfọdụ ha nụrụ site na ndị ndụmọdụ SEO… DK New Media